30 Maalin warkooda lama hayo guddigii xaqiiqo raadinta | KEYDMEDIA ONLINE
30 Maalin warkooda lama hayo guddigii xaqiiqo raadinta
Guddigii uu Ra’iisul Wasaare Rooble, u xil-saaray soo baaridda cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtooda la askareeyay ayaan warkooda la hayn muddo 30 cisho ah oo ay magacaaban yihiin.
MUQDISHO, Soomaaliya – Soddon maalmood ayaa ka soo wareegtay markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiin Soomaaliyeed, kuwaas oo aan caruurtooda raq iyo ruux midna heyn in muddo ah.
Maanta oo kale bishii hore, 12 June 2021, ayaa la magaacaabay guddiga xaqiiqo radinta cabshada Waalidiinta, mana jirrto wax shaqo ah oo guddigu qabtay, isla-markaana uu la wadaagay bulshada.
Guddigaan oo la rumeysnaa in aysan wax shaqo ka qaban doonin arrintaan, ayaa markii hore laga soo magacaabay xaafiiska Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxaana la soo marsiiyay xaafiiska Rooble, si aan xasaasiyad looga qaadin.
Warbixin ka soo baxday Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eratariya ay ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya.
Sido kale sii hayaha ku-xigeenka Xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka, Robert F. Godec, ayaa sheegay Mareykanku uu xaqiijinayaa in ciidamadii Soomaaliya ee loo qaaday Eritrea lagu arkay gudaha Itoobiya.